Moto chipinganidzo Fekitori - China Moto chipingamupinyi Vagadziri, vatengesi
Moto unodzivirira bhodhi (modhi: dc-a2-cd08)
dc-a2-cd08 isina moto yekuisa chisimbiso paplate system rudzi rutsva rwezvinhu zvisina moto zvinogadzirwa nekambani yedu, isina hwema, isina halogen, ine yakanaka yekudzivirira mamiriro ekunze, kuomesa utsi uye kuomesa kwemhepo. Inoshandiswa zvakanyanya musimba renyukireya, simba telecommunication, simbi uye petrochemical indasitiri. Nekuti iko kuvaka kuri nyore, saka kunogona kuchengetedza manpower uye kudzikisa mutengo. Inonyanya kukodzera kutsiva tambo kutsiva Zvakakosha zvikamu zvemuviri.
Dc-a1-cd04 inorganic fire barrier inonzi zvakare chipingaidzo chemoto kana isina moto unopisa ndiro. Iri bhodhi rakagadzirwa nemhando dzakasiyana dzezvinhu zvisingatsve nekutumirwa nesainzi nekudzvanya Iine yakanaka murazvo inodzora mashandiro, isiri nguva yekupisa yeanopfuura maawa matatu kana paine moto, yakakwira michini simba, isiri kuputika, mvura nemafuta kuramba, yakasimba kemikari ngura kuramba, isina-chepfu uye mamwe maitiro. Muyedzo yekupisa ye dc-a1-cd04 inorganic moto chipingamupinyi, yakanakisa tembiricha tembiricha iri 1000 ℃ isina deformation, indekisi dzese dzinosangana nezvinodiwa zve gb23864-2009, uye kuita kwemoto kunosvika kune (incombustibility) chiyero chakatsanangurwa mu GB / t2408 -2008. Dc-a1-cd04 inorganic moto chipingamupinyi chinonyanya kushanda pakudzivirira moto uye kupatsanura moto kwetambo dzemhando dzakasiyana dzemagetsi kana ichigadzikwa pabhureki kana bhiriji Iyo inoshandiswa mune yeinjiniya yemagetsi yezvigadzirwa zvemagetsi, emakemikari emakambani, simbi nesimbi yekuyeredza mabhizinesi. , migodhi uye dzimwe nzvimbo dzakakomberedza tambo muChina.
Moto yekumisa module
Dm-a3-cd05 moto unodzora moduru wakagadzirwa neyemberi isiri-chepfu moto unodzora kuwedzera zvinhu uye yakakosha maitiro. Inonyanya kushandiswa mukutsva-moto-tambo, tambo nemagetsi emagetsi emagetsi, kutaurirana, simbi, petrochemical nemamwe maindasitiri.